Simema izitolo zezimbali eFloristum.ru
- Amakhasimende amasha mahhala!
IFloristum.ru inikeza amathuluzi asebenzayo wokuheha amakhasimende amasha ezitolo zezimbali nezimbali zezimbali mahhala.
Le nsizakalo kulula ukuyisebenzisa:
Layisha ama-bouquets ohlelweni.
Thola ama-oda amasha.
Ukubhalisa nokusebenza ohlelweni akudingi mali.
Akunasidingo sokufaka imali ohlelweni, ngaphezu kwalokho, umsebenzi wokufaka imali awunikeziwe.
okungathathi ngaphezu komzuzu, futhi ungalayisha ngokushesha izimbali zakho kuFloristum.ru bese uthola ama-oda amasha.
Izidingo ezincane zemishini yobuchwepheshe yama-florists nezithunywa.
Konke okudingayo ukusebenza nohlelo nokufeza i-oda yinoma iyiphi ifoni, ngisho nenkinobho elula yokucindezela. Lokhu kungenzeka ngenxa yohlelo olulula, lwe-ergonomic olususelwa ku-SMS kanye nokuphathwa kwe-oda olungadingi ukufakwa kwezicelo kumafoni abashayeli bezimbali nabathumeli bezincwadi.
Impendulo evela kumakhasimende kuzibuyekezo.
Ukukhulisa ukuthengisa, kubaluleke kakhulu ukuqonda ukuthi uneliseke kangakanani ikhasimende ngokulethwa kwezimbali. IFloristum.ru ikhuthaza iklayenti ngalinye ukuthi lishiye impendulo ngesixha esitholakele.
Ungathengisa ama-bouquets ku-Floristum.ru uma:
Ukulungele ukusebenza njengenhlangano esemthethweni ngokudluliselwa kwebhange.
Unensizakalo yakho yokulethwa noma unguzakwethu wanoma yiziphi izinsizakalo zokulethwa.
Siyavumelana nekhomishini yohlelo: ama-20% wezimbali, i-10% yezimbali ngcezu ngalinye.
Sibona abalingani bethu begcina kanjena:
Abalingani beFloristum.ru ngeke nakanjani bashiye iklayenti labo ngaphandle kwezimbali, bahlala benesizotha futhi bengesabi noma yibuphi ubunzima. Izitolo zihlose ukuthuthukisa njalo izinga lomsebenzi wazo, ikhwalithi yesevisi, zikulungele ukuthuthuka kanye nengosi.
Sikhuthaza izitolo ezinezibuyekezo ezinhle:
KuFloristum.ru, amakhasimende angashiya impendulo ukuthi uwuthande kangakanani umsebenzi, aneliseke kangakanani ngekhwalithi yokulethwa. Banganikeza futhi ibanga elifanele. Ngokwezibalo, ngaphezu kwesigamu samakhasimende enza lokhu, futhi yingaleso ndlela okwakhiwa ngayo isilinganiso sezitolo nabasebenza ngezingcweti. Futhi ngesisekelo sayo, izingcweti nezitolo zezimbali ngokukala okuphezulu kungabokuqala ukuvela emiphumeleni yokucinga esizeni.
Bhalisa khona manje!